I-10 ePhantsi kweDyunivesithi yaseIreland Umrhumo waBafundi baMazwe ngaMazwe ngo-2022
Oktobha 22, 2021 Eze uThadayo
I-10 esezantsi kwiDyunivesithi yaseIreland imirhumo yaBafundi baMazwe ngaMazwe
Jonga uluhlu lwemirhumo yedyunivesithi yaseIreland kubafundi bamazwe aphesheya esiqulunqe kule post yebhlog. Iiyunivesithi zaseIreland zixabiso eliphantsi kwaye zibonelela ngemfundo esemgangathweni, kwaye inokuba lukhetho olufanelekileyo kuwe ukuba uthathe isigqibo sokufunda eYurophu.
I-Ireland lelinye lawona mazwe atyebileyo emhlabeni kwaye kutheni ndiyikhankanya le nto okanye inento yokwenza nokuya kwakho ukuya kufunda?
Njengelizwe elityebileyo, oku kwenza urhulumente atsale imali eninzi kumacandelo anje ngemfundo ngaloo ndlela esenza ukuba ibe yexabiso eliphantsi kwaye ifikeleleke kubemi nakubantu bamanye amazwe. Ngaphandle kwalonto, amathuba ahlukeneyo ezemali anje ngezifundo, iibhasari, ubudlelwane kunye namanye amathuba ezemali anceda abafundi.
Kananjalo, njengelizwe elityebileyo, oku kuthetha ukuba uninzi lwabemi bazizityebi, ke ngoko, amazinga olwaphulo-mthetho asezantsi ngokwenene. Izinga lolwaphulo-mthetho yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo xa usiya kufunda phesheya. Izinga lolwaphulo-mthetho olusezantsi, kokukhona kuya kukhuseleka ngakumbi. Ukhuseleko yinto enkulu enkulu naphi na apho uya khona.
I-Ireland lelinye lawona mazwe akhuselekileyo eYurophu kunye nelona lizwe lihle ehlabathini. Ukudityaniswa kobuhle bayo, lukhetho olufanelekileyo kubafundi abanqwenela ukufunda phesheya. Kwaye oku kubonakala kumanani, i-Ireland yeyona ndawo iphambili phakathi kwabafundi bamanye amazwe.
Abafundi abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo nakwiindlela ezahlukeneyo zobomi bayathontelana apha minyaka le ukulandela izidanga ezikumgangatho ophezulu kuluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo. Iinkqubo zivela kwishishini, ubunjineli, kunye noluntu ukuya kwisayensi yezentlalo, ulwimi lwesiNgesi, kunye namayeza alandelwa kwinqanaba lokufundela, isidanga, okanye ubugqirha.
Ezinye iiyunivesithi kunye neenkqubo zemfundo eIreland zibekwe phakathi kwezona zibalaseleyo kwihlabathi. Ke ngoko, uya kuba ufumana imfundo ekumgangatho wehlabathi kwaye uphumelele isidanga esamkelwa kwihlabathi liphela. Kwakhona, iiyunivesithi ezininzi eIreland, uninzi lwazo, zamkela abafundi bamazwe aphesheya kuzo zonke iinkqubo zabo.
Kule posi, senze uluhlu lwemirhumo yeeyunivesithi zaseIreland zabafundi bamanye amazwe. Oku kuyakunika ukuqonda kwiindleko zokufunda eIreland kwaye zikuncede ulungiselele ukugubungela iindleko.
1 Yintoni i-Avareji yoMrhumo weYunivesithi yaseIreland kubaFundi beZizwe ngeZizwe
2 Ngaba aBafundi beZizwe ngeZizwe banokuFumana ukuHanjiswa kweMali yokuFundisa eIreland?
3 Iifizi zeDyunivesithi zaseIreland zaBafundi baMazwe ngaMazwe
3.1 1. IKholeji yaseTrinity yaseDublin
3.2 2. ISikolo soShishino saseDublin
3.3 3. IZiko leTekhnoloji laseCork
3.4 4. IYunivesithi yaseLimerick
3.5 5. IYunivesithi yeSizwe yaseIreland (NIU)
3.6 6. KwiYunivesithi yaseDublin
3.7 7. IYunivesithi yaseKholeji Cork
3.8 8. IKholeji yaseGriffith
4 I-FAQs eIreland uluhlu lweefizi zabafundi bamanye amazwe
Yintoni i-Avareji yoMrhumo weYunivesithi yaseIreland kubaFundi beZizwe ngeZizwe
Imirhumo yeyunivesithi yabafundi bamanye amazwe eIreland iyahluka ngokwenkqubo oyikhethileyo kunye nenqanaba lokufunda. Ezinye iinkqubo zibiza ngaphezulu kunezinye kwaye ukuba uyakuba sisidanga sokuqala, isidanga senkosi, okanye isidanga sobugqirha, iifizi ziya kwahluka.
Iikhosi zexabiso eliphantsi zokufunda kwiiyunivesithi zaseIreland njengomfundi wamazwe aphesheya ngabantu, imfundo, kunye nezobugcisa, ngelixa ubunjineli, amayeza, ishishini, kunye nezifundo zolawulo zibiza kakhulu.
Izikolo zikarhulumente eIreland zisimahla kubafundi abavela kuyo nayiphi na i-EU kunye ne-EEA amazwe. Kubafundi abanga-EU, umndilili weefizi zokufunda kwiinkqubo zesidanga sokuqala kwiiyunivesithi zikarhulumente ukusuka kwi- € 6,000 - € 12,000 ngonyaka. Ngelixa labafundi abenza isidanga sokuqala kunye nenkosi, iifizi zivela kwi- € 6,150 ukuya kwi- € 15,000 ngonyaka.
Izifundo kwiidyunivesithi zabucala ziphezulu kwaye kufuneka ulindele ukuhlawuliswa phakathi kwe-9,000 yee-€35,000 kwizifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala.
Ngaba aBafundi beZizwe ngeZizwe banokuFumana ukuHanjiswa kweMali yokuFundisa eIreland?
Ezinye iiyunivesithi zaseIreland ziyimithombo elungileyo yenkxaso-mali kubafundi bamazwe aphesheya. Banikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zamathuba emali ukusukela kwi-merit kunye ne-scholarship esekelwe kwimfuno ukuya kwiinkosi ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo kunye nokukhutshwa kweefizi zokufunda.
Ke, njengomfundi wamazwe aphesheya, ungakulungela ukufumana imali yokufunda eIreland. Nangona kunjalo, kufuneka ukwazi ukuhlangabezana neemfuno okanye indlela yokufaneleka ukuze ufumane ukuyekwa kwemali yokufunda.
Iifizi zeDyunivesithi zaseIreland zaBafundi baMazwe ngaMazwe
Apha ngezantsi kukho uluhlu oluhlanganisiweyo lwezona zifizi zeidyunivesithi zaseIreland zisezantsi zabafundi bamazwe aphesheya. Iidyunivesithi ziphinde zixoxwe ngezantsi ngamakhonkco afanelekileyo anikezelweyo ukuze ufunde ngakumbi ngesikolo osikhethileyo.
College of Trinity College Dublin
KwiSikolo soShishino saseDublin
ICork Institute of Technology
IYunivesithi yeSizwe yaseIreland (NIU)
ICork College Cork
1. Ikholeji kathathu yaseDublin
Ikholeji yaseTrinity i-Dublin yasekwa e-1592 iyenza ukuba ingabi liziko nje elidala kuphela e-Ireland kodwa yenye yeeyunivesithi zamandulo ezisixhenxe zase-Bhritane nase-Ireland. Iyunivesithi isebenzise yonke iminyaka yayo ukwakha igama elihle kwezemfundo kunye namandla ophando. Oku kwenza uninzi lweenkqubo zalo ezijolise kuphando phakathi kwezona zibalaseleyo eYurophu nakwihlabathi.
Abafundi banokulandela uluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo ezisusela kwizengqondo nakwipolitiki ukuya kubunjineli nakwizixhobo zokufunda kwinqanaba lesidanga sokuqala. Yenye yeefizi zaseIreland ezisezantsi zabafundi bamanye amazwe kwaye ibonelela ngamathuba ohlukeneyo ezemali.
Imali yokufunda kwiKholeji kaTrinity eDublin yi-7,500 yee-euro.
2. ISikolo soShishino saseDublin
Ukubona igama-kwiSikolo soShishino saseDublin-unokucinga ukuba le yikholeji yeshishini eliqhelekileyo elinikezela kuphela ngeenkqubo zeshishini kunye nolawulo. Ewe, ngokuqinisekileyo iyagqwesa ngokubonelela ngemfundo ephezulu kweli lizwe kodwa ayiniki izidanga zeshishini kuphela.
ISikolo soShishino saseDublin sikwabonelela ngezifundo ezininzi kwezenzululwazi zentlalo, ezoluntu, ezengqondo kunye nobugcisa ezibonelelwa kwinqanaba lesidanga sokuqala nakwinqanaba lokufunda. Ikhampasi yayo yindawo ephilayo kunye nabantu abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo ababhalise kwiinkqubo ezahlukeneyo zemfundo. Izandla-kuqeqesho lwamava zinikezelwa kubafundi ukuze bakwazi ukuqhubela phambili ebomini emva kwesikolo kunye negalelo kuluntu nakwisizwe ngokubanzi.
Imali yokufunda kwisidanga sokuqala kwiSikolo soShishino saseDublin yi- € 10,000 ngonyaka ngelixa i-postgraduate isusela kwi- € 12,500 ukuya kwi-13,500 ngonyaka. Le yunivesithi ebonisa njengenye yeefizi zaseIreland eziphantsi kakhulu zabafundi bamanye amazwe.
3. IZiko leTekhnoloji laseCork
IZiko leTekhnoloji laseCork, elasekwa ngonyaka we-1974 kwaye likwisixeko saseCork, sisikolo esaziwayo semfundo ephakamileyo. Le yunivesithi ifikelelekayo eIreland yenziwa ukuze ixhase imfundo kwicandelo lobunjineli kunye netekhnoloji kweli lizwe, enemvelaphi yayo kwiRoyal Cork Institution.
Eliziko ngoku linabafundi abali-17,000 abafundi. Ngaphandle kokuchongwa njengeziko lobugcisa, i-CIT ibonelela ngezifundo kubugcisa, ishishini, idrama, isayensi yendalo kunye neyomzimba, umthetho kunye nobunjineli.
Ishishini noLuntu, ubuNjineli, kunye neNzululwazi zizinto ezintathu eziphambili. Ezinye izikolo namasebe awela phantsi kwamacandelo amathathu. Isifundo sabafundi bamazwe aphesheya kwiCork Institute of Technology isusela kwi- € 3,500 ukuya kwi- € 12,000 ngonyaka.
4. IYunivesithi yaseLimerick
IYunivesithi yaseLimerick yiyunivesithi yophando yoluntu edumileyo ebekwe kwisixeko saseLimerick kwingingqi yaseMidwest yaseIreland. Yasekwa ngo-1972 kwaye lolona longezo lwamva nje kwinkqubo yeyunivesithi yaseIreland. Iyunivesithi ngoku inabafundi abamalunga ne-16,000 ababhalisileyo. Abafundi abangaphezu kwama-2400 abavela kumazwe angaphezu kwe-100 benza abafundi.
Inzululwazi kunye nobunjineli, ubugcisa, ubuntu, imfundo, isayensi yezempilo, kunye neSikolo soShishino saseKemmy zizifundo ezine eziphambili zaseyunivesithi. Abafundi besidanga sokuqala kunye nabaphumelele kwizidanga banokukhetha ngaphezulu kweedigri ezahlukeneyo ze-100. Yayenye yeekholeji zokuqala zeli lizwe ukubonelela abafundi ithuba lokuthatha inxaxheba kwinkqubo yokubambisana emsebenzini
Ngamandla ayo obukrelekrele obuninzi, iyunivesithi ibisoloko idweliswa kwiiyunivesithi ezingama-500 eziphezulu kwihlabathi (ngokutsho kwamanqanaba e-QS) kunye naphakathi kwiiyunivesithi ezingama-80 ezingaphantsi kweminyaka engama-50. 3,000 ngonyaka kuxhomekeke kwinkqubo yakho yomdla.
Imirhumo yokufunda emva kwesidanga iphakathi kwe- € 3,000 kunye ne- € 12,000 ngonyaka kuxhomekeke kwinkqubo yakho.
5. IYunivesithi yeSizwe yaseIreland (NIU)
Kuluhlu lwethu lwesihlanu lweeyunivesithi zaseIreland ezisezantsi zeefizi zabafundi bamanye amazwe yiDyunivesithi yaseGalway (NIU).
IYunivesithi kaZwelonke yase-Ireland, eyaziwa ngokuba yi-NUI, ayaziwa nje kuphela ngemfundo kodwa nangokwindawo yayo. UGalway ufumene igama lesidlaliso esithi "sesona sixeko sithandekayo eIreland" kunye "nesona sixeko sihle eIreland." Uninzi lweeprofesa ze-NUI ziye zawongwa ngenxa yegalelo labo kwezemfundo, kwaye abafundi abaninzi balandela ekhondweni labo.
IYunivesithi yeSizwe yaseIreland yenye yeeyunivesithi ezifikelelekayo eIreland. Le yunivesithi ibonelela ngenani elikhulu leekhosi eziphantsi kunye nezoqoqosho kubafundi abangengabo abe-EU. Ngowe-1845, iYunivesithi yeSizwe yaseIreland yasekwa. Liziko likarhulumente. Yenye yeeyunivesithi ezidumileyo eIreland.
Iikhosi ezidumileyo abafundi abazilandelayo kwi-NIU bobunjineli, amayeza, ishishini, isayensi yolawulo, isayensi yezentlalo, kunye nokunye. Imali yokufunda yabafundi bamanye amazwe kwiinkqubo zesidanga sokuqala isuka kwi- € 5,000 ukuya kwi- € 23,000 kuxhomekeke kwinkqubo oyikhethayo. Ngelixa iifizi zesidanga sokuqala ziqala ukusuka kwi- € 5,000 ukuya kwi- € 18,000.
6. KwiYunivesithi yaseDublin
IYunivesithi yaseDublin ikwiKholeji yeYunivesithi iphakathi kwe-1% yamaziko aphezulu aphezulu kwihlabathi. Yenye yeeyunivesithi eziphambili kuphando-nzulu eYurophu. Ibonelela ngendawo yokufunda edlamkileyo efanele imfundo yabangekabinazidanga, iimasters kunye nePh.D. uqeqesho, uphando, ukusungula izinto ezintsha, kunye nolawulo loluntu.
I-UCD ikwamkelwa njengeyona yunivesithi yaseIreland ibandakanyekayo kwihlabathi elinabafundi abangaphezu kwama-33,000 abathathwe kumazwe ali-144. Ezi zixhobo ziquka iZiko leSayensi i-O'Brien, iZikolo zoMthetho zaseSutherland, iSikolo soShishino saseLochlan Quinn, iZiko lezoShishino leMoore, kunye neZiko laBafundi le-UCD.
Imali yokufunda e-UCD iqala kwi- € 6,700 ngonyaka kwaye inqaku njengenye yeefizi zaseIreland eziphantsi kakhulu zabafundi bamanye amazwe.
7. IYunivesithi yaseKholeji Cork
IYunivesithi yaseKholeji Cork (UCC) yikholeji yeYunivesithi yeSizwe yaseIreland, kwaye ikwiCork, idolophu yesibini ngobukhulu eIreland. Ngaphezulu kwabafundi abangama-20,000, iyunivesithi lelinye lamaziko emfundo aphakamileyo kweli lizwe ngokubhaliswa kwabafundi. Ikwanomzimba omkhulu wabafundi bamazwe aphesheya abangama-2500 abafundi.
Ikholeji yamayeza kunye nempilo, kunye neekholeji zabantu, ubunjineli, ishishini kunye nomthetho, kunye nezifundo zeCeltic kunye nesayensi yezentlalo, ezenza iprofayile yokufunda yaseyunivesithi. Ngapha koko, iyunivesithi ithathwa njengelinye lamaziko aphambili ophando kweli lizwe, ngakumbi kwicandelo le-nanotechnology, uphando ngendalo esingqongileyo, kunye netekhnoloji yokutya.
Akumangalisi ukuba iyunivesithi ibekwe phakathi kwe-2% ephezulu yeeyunivesithi emhlabeni kunye naphakathi kweeyunivesithi eziphezulu ze-500 emhlabeni, ngokwe-QS kunye ne-Times Higher Education rankings.
Imali yokufunda e-UCC iqala kwi-€ 10,000 ngonyaka.
8. Ikholeji yaseGriffith
Kuluhlu lwethu lokugqibela lweIreland, iifizi zeyunivesithi zabafundi bamanye amazwe yiGriffith College.
Ikholeji yaseGriffith liziko lemfundo ephakamileyo labucala eDublin, isixeko esilikomkhulu laseIreland. Yenye yeekholeji ezinkulu zabucala kunye nezona zidumileyo kweli lizwe. Eli ziko lasekwa ngo-1974 ukuze lixhobise abaza kuba ngabafundi ngezakhono zoshishino nezocwangciso-mali.
Ngoku ikhule yaba liziko elaziwa kwilizwe liphela elinikezela ngemfundo kwiinkalo ezahlukeneyo ngaphandle kweshishini. Ikholeji yaseGriffith ngoku ine-7000 yabafundi abenza isidanga kunye nabaphumelele kwizidanga ababhalise. Iprofayile yezemfundo yekholeji ibandakanya ubume obahlukeneyo obuvela kwishishini kunye nomthetho kuphando lwamayeza kunye noyilo. Abafundi banokufikelela kwinani elikhulu lezifundo ezahlukeneyo.
Imali yokufunda kwiKholeji yaseGriffith eDublin iqala ukusuka kwi- € 12,000 yabafundi bamanye amazwe
Le yimirhumo yeeyunivesithi zaseIreland zabafundi bamanye amazwe, iifizi ziyahluka ngokwenkqubo ukuya kwinkqubo. Landela amakhonkco enkqubo ukuze wazi ukuba yimalini na inkqubo yakho.
I-FAQs eIreland uluhlu lweefizi zabafundi bamanye amazwe
Ngaba abafundi bamanye amazwe bahlawula iifizi eziphezulu kunabafundi baseIreland?
Abafundi bamanye amazwe eIreland bahlawula iifizi eziphezulu kunale ndawo. Imfundo ayi-100% yasimahla kubantu bendawo.
Umfundi welinye ilizwe angaziphepha njani iiyunivesithi ezibiza kakhulu eIreland?
Ukunqanda iiyunivesithi ezibiza kakhulu eIreland njengomfundi wamazwe aphesheya, kuya kufuneka ufake isicelo kwizikolo zikarhulumente. Amaxabiso aphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nalawo abucala kwaye anika amathuba amaninzi oncedo lwemali.
Ndingazifumana njani iiyunivesithi zaseIreland ezinemirhumo efikelelekayo?
Jonga kwi-intanethi kwizikolo ezinamaxabiso aphantsi okanye ezinamaxabiso aphantsi eIreland okanye ezingcono nangoku, ngokulula nje uluhlu oluluhlu lwemirhumo yeyunivesithi yaseIreland yabafundi bamanye amazwe. Ezi zikolo zidweliswe kwaye zaxoxwa apha zezona yunivesithi zibiza kakhulu eIreland zabafundi bamanye amazwe.
I-8 yeeMasters eziGqwesileyo eIreland zaBafundi beZizwe ngezizwe
I-11 yezifundo zeDyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
I-8 iIyunivesithi eziPhezulu zaseIreland zaBafundi beZizwe ngezizwe
Iiyunivesithi eziphezulu ze-15 zasePoland zaBafundi beZizwe ngezizwe
I-13 yeXabiso eliphantsi kwiCanada yaBafundi beZizwe ngeZizwe
IiYunivesithi eziFundayo eziNcinci IYunivesithi yaseYurophu Izikolo zokuFundisa Simahla Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo
Iidyunivesithi zaseIreland zihlawulela abafundi bamazwe aphesheyaUluhlu lweefizi kwiiyunivesithi zaseIreland kubafundi bamazwe aphesheyaUluhlu lweefizi eziphantsi kakhulu zaseIreland zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Uluhlu lweZikolo zeIvy League neMirhumo yazo yangoku
Okulandelayo Post:I-13 yeZikolo eziBalaseleyo ze-Ivy League zePre Med